ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရေးတဲ့ ကျောင်းသား နှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ~ ဒီမိုဝေယံ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရေးတဲ့ ကျောင်းသား နှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ
ပညာစစ်ကိုရရန် လွတ်လပ်စွာတွေးတော ပြောဆို ဆွေးနွေး လုပ်ကိုင်လိုသောစိတ်ဓါတ်ကို မွေးရန်လို၏။ အချက်ကို ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်များက Academic Freedom ပညာသင်ကြားရေး လွပ်လပ်ခွင့်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ ဤအချက်ကား ကမ္ဘာ့ရာဇဝင်ကို တမျိုးတမည် ပြောင်းလွဲစေသည့် ရီနေဆွန့်နှင့် ရီဖော်မေရှင်းခေါ် ခေတ်သစ်ဝါဒ၊ လောကဓါတ်ပညာ ပြန့်ပွားရာ အကြောင်းရင်းတည်း။ ဤအချက်ကား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂေါတမဘုရားသခင် ဟောကြားသော ကာလာမသုတ္တန် သဘောအရပင်တည်း။
ထိုလွပ်လပ်စွား တွေးတောပြောဆို ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်လိုသော စိတ်ရှိရမည် ဆိုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိထင်ရာ တွေးတောပြောဆို လုပ်ကိုင်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ လောကရှိ လူအပေါင်းတို့သည် ရေးတွင်းထဲရှိ ဖားသူငယ်ကဲ့သို့ နေ၍မဖြစ်ပေ။ တဦးနှင့်တဦး ကူးလူးဆက်ဆံရလေသည်။ ယခုခေတ်အခါတွင် ဤသို့ ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းမှာ ပိုမို၍ပင် နယ်ကျယ်လာလေသည်။ ယခု အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည် ကြုံတွေ့နေရသော ရှားပါးခေတ်သည် ထိုဥပဒေကို လွန်ဆန်၍ ကိုယ့်ဘက်၊ ကိုယ့်သဘောကိုသာမြင်သော၊ ဝါဒကြောင့်ဖြစ်သော ကမ္ဘာစစ်ကြီး၏ ပဲ့တင်သံ ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရာ လူတိုင်း၊ လူတိုင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပေါင်းအသင်း သမဂ္ဂရှိမှသာ အမျိုးမျိူးသော အယူအဆ အမှတ်အသား တို့ကို တွေ့မြင်သိရှိရ၍၊ ပိုမို အမြင်ကျယ်လာနိုင်လေသည်။ သို့အမြင်ကျယ်မှ တဦးကိုတဦး အနာခံတတ်ခြင်း၊ စောင်မကူညီတတ်ခြင်း၊ အပြောအဆို အနေအထိုင်ပြုပြင်လာခြင်း၊ စသဖြင့် လောကလူလုပ်တတ်သည့် အရည်အချင်းများ ရနိုင်လေသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုသို့ ကူးလူးဆက်ဆံ အမြင်သန်အောင်၊ ကျောင်းများ၊ တက္ကလိုလ်များတွင် ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစားထားခြင်း၊ အသင်းအပင်းများထောင်ခြင်း စသည်တို့ ပြုကြရသည်။ သို့ရာတွင် အပေါင်းအသင်း သမဂ္ဂအတွက် ပြုလုပ်ရာတွင် လွတ်လပ်စွာမပြောရ မဆိုရ မလုပ်ရ မဆွေးနွေးရလျှင်၊ မျက်စိပိတ်ထားသည်နှင့် တူပြန်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ၂ ဘက်၊ ၂ ချက်စုံမှ ပညာရေးအစစ် မည်လေသည်။
တဖန် ယနေ့ဖြစ်သော ကျောင်းသားများသည် နက်ဖြန်ပြည်ကြီးသားများ ဖြစ်ကြ၏ဟု ဆိုရိုးစကား ရှိ၏။ သို့ဖြစ်ရာ ပြည်ကြီးသားတို့၏ အင်္ဂါလက္ခဏာတို့နှင့် ညီအောင် အုပ်ချုပ်နည်း၊ မိမိအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ခိုက်နည်း၊ စကားပြောနည်း၊ စည်းကမ်းသေဝပ်နည်း၊ ကိုယ်လက်ကျန်းမာရေး စသဖြင့် နည်းမျိုးစုံအောင် အသင်းအပင်းများ၊ ရဲတပ်များ၊ ကစားနည်းများကို ထွင်ကြ၏။ ထိုမျှမက ယခုအခါ တနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံမှာ ခွဲစပ်၍ မဖြစ်နိုင်။ တရုတ်ပြည်၊ စပိန်ပြည်၊ ပါလက်စတိုင်းပြည်တွင် အဖြစ်အပျက်များသည် ဤတိုင်းပြည်ကို လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းကောင်း၊ လူသတ္တဝါတို့အားလည်းကောင်း မည်သို့မည်ပုံ ထိခိုက်မည်ဟု သိနိုင်အောင် ကမ္ဘာ့အခြေကိုလည်း မိမိရရသိရန် လို၏။ ဤသည်တို့ကား အကြမ်းမျှ ကျောင်းသားတို့ပြုလုပ်ရမည့် ဝတ္တရားများ ဖြစ်ကြ၏။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာရှိကျောင်းသားအပေါင်းတို့သည် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍၊ စစ်မက်တားမြစ်ရေး၊ အလုပ်လက်မဲ့ ပပျောက်ရေးအကြောင်းစနစ်ကို ရှာဖွေနေကြ၏။ အခြေအထူးမလှသော စပိန်ပြည်နှင့် တရုတ်ပြည်တို့တွင် ကျောင်းသားတို့မှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တိုက်ခိုက်နေကြရ၏။ ထို့ကြောင့် အချိန်နှင့်အခါအလျှောက်လည်း၊ ကျောင်းသား၏ ဝတ္တရားလည်း ကွဲလာ၏။ ဤပြဆိုခဲ့ပြီးသော ကျောင်းသားဝတ္တရား အားလုံးကို သိမြင်သည်နှင့်အညီ နောင်ခေတ်ဗမာပြည်ကို ဖန်တီးမည့် ကျောင်းသားများသည် ယခုလူများကဲ့သို့ မညီမညွတ်၊ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် မဖြစ်ရအောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအသင်းကြီး ကို အထင်အရှား တည်ထောင်ထား၏။ ထိုအသင်းကို ဝင်ရောက်အားပေးရန်မှာ ကျောင်းသားတိုင်း တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိသောသူတိုင်း၏ တာဝန်ပင်တည်း။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သမဂ္ဂအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ကိုအောင်ဆန်း ရေးသော “ကျောင်းသားဝတ္တရား” ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်ချက်….
ဤဆောင်းပါးကို မန္တလေးသူရိယ (အမျိုးသားနေ့ အထူးစာစောင်)၊ ၁၂၉၉ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ရက်နေ့ စာ ၁၇-၁၈ တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့်တကွ အားလုံးသော ရဟန်းအာဇာနည်၊ ကျောင်းသားအာဇာနည်၊ လူအာဇာနည် အပေါင်းတို့အား လေးစားသောအားဖြင့် ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ၊ ဘလော့ခ်ဂါ အလင်းဆက်၊ ဘလော့ခ်ဂါ ခမိခဆဲနှင့် ဒီဖိုင်း ကောင်းကောင်းတို့မှ ရှာဖွေတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
တင်ပြသူများ……….ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ၊ ဘလော့ခ်ဂါ အလင်းဆက်၊ ဘလော့ခ်ဂါ ခမိခဆဲနှင့် ဒီဖိုင်း ကောင်းကောင်း
၂၆. အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၀